Bakteeriya iska caabisa daawooyinka. - BBC Somali
Bakteeriya iska caabisa daawooyinka.
Saynisyahanno ayaa ca deeyey in bagteeriyo ku jirta dadka iyo xoolaha, oo haatan laga helo Shiinaha ay noqotay mid iska caabin adag kala hor imaneysa daawada antibiotics-ka.
Waxey ku qeexeen ogaanshaha arrintan mid si weyn loogga walwalo.
Cilmi baaristan ayaa lagu daabacay wargeys lafagura caafimaadka oo la yiraahdo (the Lancet), kaasoo ku tala bixiyey in iska caabintan ay ku fidi karto dunida oo idil, taasoo dhalin karta in caabuqyada la daweyn kari waayo.
Dhibaatadan ayaa loo maleynayaa iney timid, ka gadaal markii loo isticmaalay xoolaha lagu falo beeraha Shiinaha daawo la yiraahdo colistin – taasoo ah daawo la isticmaalo markii ay shaqeyn waayeen dhammaan daawooyinka kale sida antibiotic-ga.
(Wasiirrada Shiinaha ayaa lagu wadaa iney kulmaan, si ay isula gorfeeyaan haddii la mamnuuci karo daawada colistin iyo in kale.